Sushma Karki - model and actress
Topic: Sushma Karki - model and actress
Author Topic: Sushma Karki - model and actress (Read 167259 times)
Re: Sushma Karki - model and actress
« Reply #50 on: August 10, 2014, 01:06:32 AM »
01.jpg (102.2 kB, 699x992 - viewed 384 times.)
02.jpg (83.44 kB, 731x812 - viewed 396 times.)
« Reply #51 on: August 11, 2014, 12:38:53 PM »
ब्रेकअप सँगै चर्चामा सुष्मा
पछिल्लो समयमा अभिनय र कलाकारिताबाट त्यति चर्चामा आउन नसके पनि सुष्मा कार्की प्रेम र ब्रेकअपको घटनाबाट भने चर्चामा आएकी छन्। प्रेमी निरन शाहीसँग उनको ब्रेकअप भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ। गत महिना मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका लागि देश दौडाहमा निस्केका उनीहरू पछिल्लो समय कुटाकुटको अवस्थामा समेत पुगिसकेको बताइन्छ।
त्यसो त सुष्मा र निरनको खटपटको समाचार पहिले पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो। चलचित्र नोटबुकको आइटम एक गीतको छायांकनको क्रममा सुष्माले कम लुगा लगाएपछि प्रेमीले आपत्ति जनाएका थिए। यो घटनामा सुष्माले आँसु नै चुहाएकी थिइन्। गत मंगलबार उनीहरूबीच कुटाकुट भएको हल्ला चल्यो। गत महिना उनीहरूको जिल्ला दौडाह पनि कार्यक्रमको लागि मात्र भएको सुष्माले बताएकी छन्। लिभिङ टुगेदर सम्म पुगेको उनीहरूको सम्बन्ध किन यसरी बिग्रियो त? सुष्माले सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्ने क्रममा भनेकी छन्,‘उसले उठ् भने उठ्ने बस भने बस्ने, म त कठपुतली नै भएको थिएँ।’ सँगै बस्न थालेको दुई महिना पछि आफूले शारीरिक यातना पाउन थालेको पनि उनले बताएकी छन्। प्रेमी निरनले पनि असमझदारीको कारणले आफूहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूको यो भनाई किन? चर्चामा मात्र आउन हो वा माथि उल्लेख गरिएकै कारण यो थाहा पाउन अबका दिनको व्यवहार हेर्नु पर्छ।
« Reply #52 on: August 11, 2014, 11:30:04 PM »
उध्रेको चोली होइन भर्दैछु झोली ।
सुनकोशी पीडितका लागि सहयोग जुटाउदै नायिका सुष्मा कार्की
पछिल्लो समय अत्याधिक स्क्याण्डलमा मुछिएकी नायिका सुष्मा कार्की यतिबेला के गर्दै होलिन भन्ने कौतुहलता जो कोहिमा हुन सक्छ । बिशेष गरी उध्रेको चोली नायिकाको रुपमा चिनिएकी अत्यन्त हट नायिका सुष्मा कार्कीको चोली मात्र उध्रदैन कहिले कसो झोली भराउने काम पनि गर्ने गर्छिन् ।
प्रेम पिडा बाट विछिप्त बनेकी सुष्मालाई प्रेमको राहत चाहिएको बेला उनले भने सुनकोशी बाढी-पहिरो पीडितका लागि राहत संकलनमा जोड दिएकी छिन् । उनी शनिबार राहत संकलनको पर्चा बोकेको स्थितीमा नयाँ बसपार्कमा भेटीयो । राष्ट्रिय संगितकर्मी संघकोको पहलमा गरिएको उक्त राहत संकलन कार्यक्रममा सुष्माले सकृयता देखाएकी हुन । सुष्मा लगायत संगित क्षेत्रका चर्चित अनुहार रेशम थापा,विरही कार्की,रुपक डोटेल,प्रकाश कटुवाल,नवरा घोरासैनी,रमेश दुलाल लगायतका कलाकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
हट नायिका सहभागी उक्त राहत संकलन समुहले शनिबार सतसठ्ठी हजार रकम र जिन्सी गर्दा लगभग २ लाख ६० हजार जति राहत संकलन गरेका छन् । उक्त संकलित राहत राष्ट्रिय संगितकर्मी संघले भदौको पहिलो साता घटना स्थलमा लगेर राहत वितरण गर्ने संघका अध्यक्ष रेशम थापाले बताए । सामाजिक काममा सुष्माको सहभागिता रहनु समग्र रुपमा चलचित्र उद्योगकै लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
« Reply #53 on: August 28, 2014, 01:44:23 AM »
« Reply #54 on: March 12, 2015, 09:23:18 AM »
अश्लील फिल्म खेलेर ठुलो भुल गरे – सुष्मा कार्की
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विवाद परिरहने र प्रेमका कारण चर्चामा आइरहने अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले आफुले जीवनमा अश्लील फिल्म खेलेर ठुलो भुल गरेको बताएकी छन ।
नेपाली परिवेश अनुसार मैले जुन काम गरे त्यो कामले आज मलाई पछुतो भएको बताउदै उनले अब त्यस्तो फिल्ममा काम नगर्ने बताएकी छन ।
बिन्दास २ पछि उनि करिब डेढ बर्ष यो क्षेत्रबाट टाढा रहिन कारण उनको हातमा कुनै पनि फिल्म थिएन । आफुले खेलेको अश्लील फिल्मको कारण आफ्नो फिल्मी करियर नौ संकटमा परेको भन्दै अब आफुबाट यस्तो गम्भीर भुल नहुने बताएकी छन । यस्तो फिल्म खेलेर आज सम्म मैले केहि पाएको छैन अझ बद्नाम मात्र भयो उनले भनिन कुनै पनि फिल्मलाई अश्लील भन्दा सकारात्मक कुराबाट पनि त्यो ठाउमा पुग्न सकिन्छ त्यो काम निर्देशकको हातमा भर पर्छ । बलिउड अभिनेत्री बिद्या बालनले खेलेको फिल्म अश्लील छ भनेर मा भन्न सक्दिन बिषयबस्तु अश्लील भएपनि प्रयोग गर्ने तरिका सहि छ ।
आईटम गर्लको रुपमा निकै चम्किएकी सुष्मा कार्की अब बिगतको भूललाई सच्याएर अगाढी बढ्ने प्रयत्नमा छिन । लोकसंगीतको भिडियोमा समेत देखिन थालेकी उनि कुशल नृत्यांगना हुन् ।
« Reply #55 on: March 15, 2015, 12:54:39 AM »
शुष्मा फिल्म "चलेछ बतास सुस्तरी" मा प्रमोद भारद्वज संग रोमान्स गर्ने रे ...
Sushma Karki - loves bikini
« Reply #56 on: March 25, 2015, 10:14:00 AM »
नायिका सुष्मा कार्कीको नाम जब आउँछ, उनको हट अवतार पनि जोडिन्छ । चलचित्रमा आइटम गीतमा उत्तेजक नृत्य गर्न माहिर सुष्मा अहिले विकिनी फोटोसुटका कारण एकाएक चर्चामा छन् । हालै मात्र उनले विकिनी पहिरनमा फोटोसुट गरेकी छिन् । आखिर, विकिनीमा सुष्मा कार्कीको मोह के हो त, उनि सित गरिएको कुराकानी :
१. विकिनीमा तपाइको आकर्षण किन हो ?
मलाई विकिनी एकदमै मनपर्छ । अब स्विमिङ पुल जाँदा जसले पनि विकिनी लगाउँछ, मैले लगाउनै नहुने भन्ने त होइन नि ।
२. तपाइले विकिनी लगाउने कारण के हो त ?
मलाई मेरो फिगर असाध्यै मनपर्छ । फिगर विकिनी लगाउने खालको भएर नै मैले लगाएकी हुँ ।
३. तपाइको जन्मदिनमा पनि उपहार त धेरै विकिनी आउँछ रे हो ?
हो मलाई अधिकांश साथीहरुले विकिनी उपहार दिनुहुन्छ । मेरो घरमा त कलेक्शन नै भैसक्यो विकिनीको ।
४. कलेक्शन त भन्नुभयो, कती जम्मा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म ?
मसँग ४० पिस भन्दा बढि विकिनी भैसक्यो होला । मसँग भिक्टोरिया ब्रान्डको विकिनी धेरै छ ।
५.कस्तो बेलामा तपाई विकिनी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म विशेषगरी स्विमिङमा जाँदा यसको प्रयोग गर्छु । विदेशमा कार्यक्रमको सिलसिलामा जाँदा पनि विकिनी लगाएर समुन्द्रमा मस्ती गर्न रमाइलो लाग्छ ।
६. फिगर त राम्रो छ भन्नुभयो, कुन अंग आकर्षक लाग्छ त ?
मलाई मेरो छाती आकर्षक लाग्छ । छाती माथि खोपेको सूर्य अंकित ट्याटुले झनै आकर्षण थपेको धेरैले भन्नुहुन्छ ।
७. तपाई प्रेमी निरनसँग टाढा भएपछि अझ खुल्ला हुनुभयो पनि भनिन्छ नि ?
म अहिले खुल्ला पन्छी हुँ । आफूले चाहेको अनुसार उड्न सक्छु । त्यो एउटा विगत थियो, अब मलाई संझिनु नै छैन ।
८. टपलेसको बिषयमा के सोच्नु भएको छ ?
टपलेसका बारेमा मैले अहिले नै सोचेको छैन ।
९. पहिलो पटक विकिनी लगाएर हिडेको याद छ ?
मैले ८ बर्ष अगाडि विकिनी लगाएको थिए । यसपछि निरन्तर विकिनी लगाइरहेको छु । म विकिनीको सौखिन नै हुँ ।
« Reply #57 on: April 01, 2015, 03:16:23 PM »
नायिका सुष्मा कार्की ‘पोर्न स्टार’ पूर्व प्रेमी ‘साइको’(सुष्मा र नरेनको लब स्टोरी)
गत महिना एक कार्यक्रमको दौरानमा नायिका सुष्मा कार्कीलाई ‘अनुप्रस्था’ ब्याण्डका भोकलिस्ट नरेन शाहीले सार्बजनिक कार्यक्रमैमा पिटे पछी हट आइटम शुष्मा र प्रेमी नरेन बीच चिसिएको सम्बन्ध अन्तत:टुंगिएको छ । तथापि आन्तरिक मनमुटाव र कलह भने रोकिएको छैन । केहि दिन अघि मात्रै एक कार्यक्रमका आयोजकले पारिश्रमिक नदिएको कारण हनुमान ढोका पुग्दा पनि हनुमान ढोका प्रहरीकै अगाडी पनि सुष्मालाई प्रेमीले गालि गलौज र हात पात गर्ने कोसिस गरेका थिए । त्यस्तै सुष्मा सो कार्यक्रमको पारिश्रमिक लिनको लागि मंगलवार दिउसो बेस्ट फुड क्याफे पुतलीसडक पुगेकी थिइन् । सो समयमा गायक नरेन पनि त्यही आएका थिए । त्यहा सुस्मालाई देखेपछी एक्कासी नरेन सुष्मामाथि जाइ लागे र गालि गलौज गर्दै हात पात गर्ने कोसिस गरे तर त्यहा भएका अन्य कलाकारले सुष्मालाई पिटाइ खान बाट बचाए । सुष्मालाई हात पात र गालि गलौज गरे पछी सुष्माले आफ्नो दाइलाई फोन गरे पछी नरेन भागेको सुष्माले फिल्मीबजार डटकम संग बताइन् । रिलेसन ब्रेक अप भएको डेढ महिना भैसक्दा पनि भेट्ने बित्तिकै किन झगडा त भन्ने जिज्ञासामा सुष्मा भन्छिन् ‘त्यो पागल हो,साइको हो त्यस्ताको कुरै नगर्नुस ।’
सुष्माको प्रेम कहानी यस्तो छ
३ वर्ष पहिले सुष्माको नरेन संग भेट भएको थियो । उक्त भेट पछी बिस्तारै नजिक हुदै जादा केहि समयमा नै यी दुइ अफ्यरमा आए । गहिरो प्रेममा रहेपछि यी दुइले संगै बस्ने अठोट पनि गरे त्यसपछि आपसी समझदारीमा ९ महिना यी दुइ लिभिंङ टुगेदरमा एउतै छातामुनि बसे । सुस्माको सुटिङ चल्दा पुर्याउन र लिन जाने कार्यक्रममा सुष्मालाई ल्याउने लैजाने गरेका नरेनले एक फिल्मको सुटिंगकै क्रममा पनि सुष्माले हट दृश्य दिएको भन्दै झगदा गरेका थिए । यसरी नै चलेको यी दुइको माया प्रेम कहिले ब्रेक अप त कहिले प्याच अप हुन्थ्यो,र पनि सुष्मा आफ्नै प्रेमी हो भनेर सहेरै रिलेसनमा बसेकी थिइन् सोहि क्रममा अन्तत: नरेन बिबाहित भएको र उनकी पत्नी गाउमा रहेको रहस्य खुलेपछि मनमुटाब पनि भयो त्यस कारण सुष्मा आमा संग त नरेन आफ्नो बाटो लागे । सुष्माका अनुसार लिभिङ टुगेदर बाट अलग भएको बेला १४ दिन ब्रेक अप हुदा नरेनले अर्कै प्रमिका बनाएर हिडेका थिए । फेरी पनि सुष्माको मन पग्लियो पुन यी दुइ एक भए । सुष्मा फिल्म क्षेत्रबाट बिस्तारै मलिन हुदै गर्दा यी दुइले मिलेर रेस्टुरेन्ट पनि चलाए तर यस्तै झगडा र मनमुटाबका कारण उक्त रेस्टुरेन्ट छोडे । सुश्माको जन्मा दिनमा समेत नरेन रती अबेर ११ बजे आएको र जन्मा दिन मनाए पछी राती सामान्य झगडा गरेका थिए । ‘नरेनले आफुलाई पटक पटक कुट्दा,अपशब्दले गालि गलौज गर्दा पनि सहदै आएको,बिबाहित भएको थाहा पाएपछि पनि नरेन प्रतिको माया मोह नघटेको निरन्तर रुपमा माया गर्दै आए, र उसै संग जिन्दगी बिताउने चाहाना थियो तर आफ्नो अन्धो मायाले धोका दियो’ सुष्माले गह भरि आसु लिदै गुनासो पोखिन् । उनकै अनुसार नरेनले आफुलाई पटक पटक ‘त पोर्न स्टार हो ’ भन्दै मुखमा जे आउछ त्यहि शब्दले गालि गर्ने र पिट्ने गरेका थिए भने सुष्माको आमालाई समेत उनले गाली गर्ने गरेका थिए । यस्तै हुदै गर्दा पनि फुर्सदमा एकै ठाउमा हुदा सम्म पनि जति बेला पनि उसै संग स्काईपमा च्याट गर्ने गर्थे,यति सम्मकि वास रुम जादा पनि स्काईपमै झुन्डिने गरेकी थिए,उसकै नाम ढाडमा समेत लेखेको छु तर मेरो मायालाई बुझ्न सकेन अहिले उल्टै सुष्माले मेरो जीवन बर्बाद गरी भन्दै हिड्छ,बाहिरि मान्छे संग भलाद्मी भएर राम्रो भएर कुरा गर्छ ब्यबहार गर्छ तर मलाई कस्तो अत्याचार गर्यो त्यसको कुनै सिमा नै रहेन । आफ्नो ब्यथा कसलाई भनु,उसकै कारण परिवार सदस्य संग पनि सम्बन्ध चिसियो,फिल्मीकर्मी संग पनि पहिलेको जस्तो सम्बन्ध हुन सकेन ।कुनै पनि केटा संग बोल्नु,कुरा गर्नु हुन्थेन म उसकै मायामा भक्ति थिए,तर उ भने लोयल हुन सकेन, त्यसकारण पनि मेरो ब्यथा र पिडा मनमै पिल्सिएको थियो । तर अब पारिवारिक रुपमा राम्रो सम्बन्ध बनाएकी छु, उह संग अब पुन सम्बन्ध जोड्न सक्दिन,जे भयो,भयो अब राम्रो तरिकाले फिल्म खेल्छु,बिग्रेका सम्बन्धहरु सुधार्न चाहन्छु ।
** Gossip **
« Reply #58 on: April 22, 2015, 02:51:34 PM »
sushma thigh show.jpg (64.46 kB, 528x960 - viewed 329 times.)
« Reply #59 on: June 03, 2015, 02:01:59 AM »
sushma karki.jpg (196.17 kB, 474x700 - viewed 953 times.)
sushma karki2.jpg (178.93 kB, 710x467 - viewed 324 times.)